Best LG PC Suite Alternative jikwaa LG ekwentị mkpanaaka na
> Resource> Windows> Best LG PC Suite Alternative jikwaa LG ekwentị mkpanaaka na
Gịnị mere mkpa a LG PC Suite ọzọ
The LG PC Suite, ihe LG management software, anọwo na n'ihi na a bukwanu oge nke oge. Otú ọ dị, nke a LG management software enwebeghị ike iji na-egbo a ike mmaji nke ọrụ na nwere otutu flaws n'agbanyeghị na ya functionalities. Mgbe ụfọdụ, ọ na-akawanye rapaara n'oge Filiks ma ọ bụ bufee na nkekọrịta, na mgbe ụfọdụ ọ na-aga n'ụzọ kwa ngwa ngwa.
Gịnị bụ ọzọ ka LG PC Suite
Ọ bụ oge n'ihi na ị na mkpa software nwere ike n'ezie-eme ka ọ dị nnọọ mfe jikwaa videos, audio, ederede ozi, foto na ngwa ọdịnala na gị LG Android ekwentị. Wondershare MobileGo for Android (Win) ma ọ bụ Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) bụ ihe ngwọta kasị mma gị nsogbu dị ka a software nwere a dịgasị iche iche nke functionalities nke nwere ike ime ka LG ma ọ bụ ndị ọzọ Android geeks aga gaga. Ka na-amalite na Isi nke a software.
Cheta na: The Mac version adịghị nwere wuru na-online akụ center maka ngwa, videos na music nbudata. E wezụga ya, ọ dịghị awade faịlụ window nke i nwere ike jikwaa SD kaadị na kaadị ebe nchekwa ekwentị. The Mac version naanị akwado ịchọputa gị LG ma ọ bụ Android ekwentị site na eriri USB.
Ndabere gị niile data ma weghachi na ala
The LG PC Suite ọzọ na-enyere gị ndabere ka ihe niile i na gị LG ma ọ bụ ndị ọzọ Android ekwentị. Site na kọntaktsị na-SMS, si oku na ndekọ na-égwu, a software-enye gị ohere ndabere nile gị PC n'ime ole na ole clicks.
Ọzọkwa, niile data ị kwadoo ma ọ bụ họrọ data nke ndabere faịlụ nwere ike weghachiri eweghachi na ekwentị gị na dị nnọọ a click.
Nyefee Media na Files mfe
Nke a ọzọ ka LG PC Suite na-enye gị mfe management nke niile faịlụ na i nwere na ebe nchekwa ekwentị gị na SD kaadị. Ị nwere ike ịdọrọ & dobe ọ bụla media faịlụ-ejighi eriri si na gị LG ma ọ bụ ndị ọzọ Android handset ma ọ bụ na-eme na nkwụnye na eriri USB.
Syncing n'etiti Android Playlist na iTunes playlist
Akụkụ ọzọ na-eme ka Wondershare MobileGo dị ka a na-ghar LG PC Suite ọzọ bụ na ọ na-enyere gị aka mbubata listi ọkpụkpọ site na iTunes gị LG ma ọ bụ ndị ọzọ Android ekwentị, na ndị ọzọ ụzọ gburugburu.
Hazie gị Android égwu
The software-enyere gị aka download ngwa site Google Play na wụnye ngwa gị LG ekwentị ma ọ bụ ndị ọzọ gam akporo ngwaọrụ, wụnye gị hụrụ n'anya ngwa n'otu ntabi na iwepụ na-abaghị uru ngwa ọdịnala na batches. Otu nwere ike mere maka ngwa na ama na e arụnyere na gbanyere mkpọrọgwụ igwe. N'ịga n'ihu, ọ na-enyere gị ndabere niile ma ọ bụ họrọ ngwa ọdịnala si Android ekwentị na kọmputa. Wezụga ya, ọ nwere ike mfe-mere ịkwaga na ngwa ọdịnala si gị LG ekwentị gaa na SD kaadị onwe elu ohere.
Desktọpụ nnyemaaka maka SMS
Chọrọ ka iziga otu ozi niile na ndetu kọntaktị na gị LG ma ọ bụ Android, ị pụrụ ime ya na a otu nhọrọ site na PC gị site na iji software. The software nakwa nwere mma ka ndabere eri nke ozi nke mere na ị nwere ike wepu undesired na ndị onwe elu ohere.
Olee otú iji Wondershare MobileGo for Android
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị LG ekwentị ma ọ bụ Android ekwentị na kọmputa
Wụnye software na kọmputa gị na jikọọ gị LG ngwaọrụ ya site na eriri USB ma ọ bụ n'elu Wi-Fi. Mgbe gị LG ngwaọrụ jikọọ, isi interface nke software ga-egosi gị na ngwaọrụ ozugbo ọ na-ejikọrọ.
Nzọụkwụ 2. Jikwaa gị LG ekwentị
Faịlụ niile na gị LG ekwentị na-categorized na gosiri na ekpe sidebar. Ha na-égwu, Music, Videos, Photos, Ndi ana-akpo, SMS na faịlụ. Pịa ọ bụla taabụ ịbanye kwekọrọ ekwekọ window. Mgbe ahụ, mbubata, bupu ma ọ bụ ihichapụ ha.
Best Samsung Smart Gbanye Alternative Mee ekwentị Nyefee
Top 5 Android File Nyefee Software unu ga-amata
Top 10 skins / gburugburu maka Windows Media Player
Olee otú iji Windows Media Player dị ka ihe nkesa DLNA
Download VLC media ọkpụkpọ maka Windows 7 were were
DVD burner Windows 10: Olee Ọkụ DVD na Windows 10